Apache sever with ASP - MYSTERY ZILLION
Apache sever with ASP
ကိုတို့အမတို့ရေ စမေးပြီဗျား .......
ညီက classic asp ကို apache sever မှာ run ချင်ပါတယ် ဘယ်လိုလိုလုပ်ရမလဲ ... online မှာမဟုတ်ဘူး local မှာ run ကြည့်ချင်တယ်..
စာလည်းမဖတ်နိုင်တော့ မြန်မာလိုလေးရှင်းပြစေလိုပါတယ် ... :O :O :O
နောက် တခုက Mssql funtion ကိုသုံးပြီးတော့ ဒီလိုရေးထားတယ်
$server = '000.000.000.00, 56600';
$link = mssql_connect($server, 'sa', 'kwiwiivi);
[/php]အဲဒီမှာက connection ယူလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့ပါသလဲ ( ( (
server ကို command ထဲက နေ ping ကြည့်တော့ ညီသုံးထားတဲ ip မဟုတ််ပဲ တခြား ip လာပြနေတယ်.. :O
Pinging 000.000.000.00 with 32 bytes of data:
Reply from 203.128.5.21: TTL expired in transit.
Ping statistics for 000.000.000.00:
connection လဲမရဘူးဖြစ်နေတယ် ... ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါသလဲ နည်းနည်းရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ကူညီကြပါအုံးဗျား :106:
php နဲ့ mssql server ကိုလှမ်းချိတ်ချင်တယ် data တွေ ပိုချင်လို့ပါ sample ပါ code လေးပါ ရင်တော့ ကျေးဇူးအထူးပါ .....
ကြက်ဥ wrote: »
Apache ပေါ်မှာ ASP ကို run ဖို့ port လုပ်ထားတာရှိပါတယ်။
ဒီမှာ ကြည့်ပါ။ http://www.apache-asp.org/
အပျော်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကို သုံးပြီး ရေးထားတဲ့ Project တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Original ASP ထက်ပိုကောင်းတဲ့အ ချက်တွေရှိပါတယ် အသေးစိတ်ကိုရေးပြချင်ပေမယ့်
ASP ကိုတော်တော် မေ့သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ပြောရင် ဖြီးရာကျနေမယ်။
စာမဖတ်ချင်လို့တော့ မရဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာ ဖတ်မှပဲ။
ASP ကိုလေ့လာချင်ရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ IIS တင်လိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်။
ASP ကို ပထမတော့အပျော်သဘောပဲလုပ်တာပါ ဒါပေမယ့် asp မှာ နညး်လေး ထူး၂ခြားလေးလုပ်ချင်တာလေးရှိတာကြောင့် လုပ်ချင်ပါတယ် ...... ဟုတ်ကဲ့ ညီ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား ပြီးဖတ်ပါ့ မယ်.. ဖတ်ဖို့တော့တော်တော် ပျင်းနေတယ်ဗျား
ကိုသာသာ ပြောလို့ ညီလေ့လာလိုက်ပါ့မယ် ထူးခြားချက်လေး ရှိတယ်လို့ပြောတော့ ပိုစိတ်၀င်စားသွားတယ် ကိုသာသာ Original ASP ထက်ပိုကောင်းတဲ့အ ချက်တွေရှိတယ်လို့ပြေလို့ နည်း၂လောက်မှတ်မိတာလေးတွေ ကိုနည်းလောက်တော့ ပြောပြပါနော် ...
ကိုသာသာ ကစာဖတ်အားအရမ်းကောင်းတဲသူ ဆိုတော့ မှတ်မိလောက်မှာပါ ... နည်းပါးပါးလေးရှင်းပြပေးပါ ...
Mysql ကြည့်ရတာ တစ်ခြား host က database ကို လှမ်းချိတ်တယ်နဲ့တူတယ်။ အကောင်းဆုံးက localhost ပဲဗျ... လက်ရှိ Local မှာ စမ်းနေတာလား web ပေါ်မှာစမ်းနေတာလား... 00.00.00.00 ဆိုတဲ့ IP ကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မတွေ့ဘူးဖူး... localhost မှာ run နေတာဆိုရင်တော့ localhost လေးနဲ့ပဲ run ကြည့်ပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ ညီ ကလှမ်းချိတ်တာက mssql ကိုပါ... localhost မှာမရှိဘူးဗျ. .. သူတို့ပေးတာက အဲဒီ ip address ကိုပဲ လှမ်းပေးတာပါ .. ညီ သွားချိတ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်လေး ရှိရင်ပြောပြပေးပါ..
000.000.00.00, ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ.. ဥပမာ... ပါ ... ညီ ရဲ ip ကို ping ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီ ip နဲ့မပြပဲ တခြား ip address ကြီးထွက်လာတာပါ.........
Pinging 203.128.5.5 with 32 bytes of data:
အမှန်တယ်ကယ်ဆို ရင် ping လိုက်ရင် သူ့ရဲ့နဂိုမူရင်း ip address နဲ့ Reply ပြန်လာရမှာမဟုတ်ဘူးလား ခင်ဗျား... မသိလို့ပါ ... နောက်တခုက ဘာဖြစ်လို့ TTL expired in transit. ဆိုတာကြီး ပါလာရတာလဲခင်ဗျား..........
ညီရဲ့ဆိုဒ်က PHP နဲ့ရေးထားတော့ သူ့ရဲ့ db က mssql ကြီးနဲဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသလဲ data တွေကိုပါ ညီရဲ့ mysql မှာကော.. သူ့ရဲ့ mssql မှာပါ update တခါတည်းလုပ်ရမှာမလို့ပါ .. ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးရှိရင်ပြောပြပေးပါ .....:77: :77:
server က ရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား.. ကျွန်တော်ပြောတာ web server ကိုပြောတာ... ဒါဆိုရင်တော့ ချိတ်လို့ရမယ်.. ping တော့ ခေါက်မနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူး.. သုံးနေတာ ပုဂံလိုင်းနဲ့တူတယ်... MPT လိုင်းဆိုရင်တော့ ping ရတယ်။ bagan တွေကတော့ ping ဆိုရင် အဲလိုပဲ ပြန်မှာ.. တကယ်လို့ web host က ရန်ကုန်ကဆိုရင်တော့ သုံးလို့ရဖို့မလွယ်ဘူးဗျ... မြန်မာနိုင်ငံက အဲဒီ IP တွေကို ပိတ်ထားတယ်လေ...
ဟီ ဟီ ညီ ပြောတာကျန်ခဲ့တယ် .. ကျွှန်တော် က အပြင်က ပါ ... web host က လည်း အပြင်ကပါ ...
That reply is returning from your router or gateway bro. Try to increase your TTL count by -i command.
ping -i 254 xxx.xxx.xxx.xxx
TTL cannot exceed 255.
Try to trace route to that IP too.
There might bealoop something like this
5 13 ms 15 ms 15 ms 1.1.1.1
6 20 ms 10 ms 10 ms 1.1.1.2
7 10 ms 10 ms 16 ms 1.1.1.1
8 24 ms 17 ms 50 ms 1.1.1.2
9 10 ms7ms 11 ms 1.1.1.1
Network ကို troubleshoot ဝိုင်းလုပ်ပေးတာပါ။ Application ပိုင်းကမသိဘူး :67: